[Abagibeli basemgwaqweni] Nanchang West Railway Station丨Sunac Park丨Coach Terminal丨Wanda Tourism City丨University City丨Outlets丨Sunacma丨3 okulala
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Sansa
1. Indlu yami: Indlu yami itholakala eHonggutan New District of Nanchang, iklanywe ngokucophelela abaklami abangochwepheshe, ifenisha ekhethwe ngokucophelela esezingeni eliphakeme, upende ongenawo we-Nippon Formaldehyde neminye imihlobiso ekhethiwe, kanye nebhula lesikhathi esigcwele lihlinzeka 24 amahora ukunaka isevisi.
2. Imininingwane yohlu: Ingaphakathi lendlu lihlotshiswe ngendlela ekhululekile futhi ekhululekile. Indlu manje isiyindlu enamagumbi amabili okulala enesakhiwo esinengqondo, ukukhanya kwelanga okuningi, ukubuka kahle indawo, nombhede othokomele kanye nomatilasi. . ngikholwa wena uzokwazi ukulala kahle. ukuze ulale kahle ebusuku, ekamelweni nayo ifakwe air conditioning, ikhabethe, ophilayo Igumbi LCD TV, wiFi free, kanye nekamelo lokugezela ehlukile (amanzi amahora 24 ashisayo). Uma ufuna ukupheka, ekhishini izokunikela amafutha, nosawoti, usoso kanye uviniga. Woza ukubukisa amakhono akho ukupheka!
Ngethemba ukuthi ngizosebenzisa imisebenzi esezandleni zami ukuletha ubumnandi okungelula ukubuthola empilweni ejwayelekile yomphakathi. Yona le ndawo yokuhlala nayo inethemba lokuthi izoletha impilo kubantu abeza kulo muzi.
3. Indaba Yomnikazi Wendawo: Ngingumsebenzisi wesikhungo se-calligraphy.Ngithanda i-calligraphy, ukudweba, ukufunda, nokuhamba.Ngihlanganisa impilo yobukhazikhazi yabahlakaniphile ekuklanyweni kwendlu. Uhlaka oluthambile nolugcwele lwefenisha, imibala ehlanzekile nehlanzekile, kanye nemihlobiso emincane enomqondo ophelele wokuklama, njll., tshela isimo esihle sokuphila asifunayo yonke indawo, futhi sibheke phambili kuzo zonke izinhlobo zezindaba ezifudumele nezothando. kulendlu.
4. Vimbela isiko: Indawo isesikhungweni sezombangazwe, amasiko, kanye nezentengiselwano. Indawo emaphakathi yedolobha lezintaba inezokuthutha ezikahle kanye nezindawo ezizungezile eziphelele.
Ezungezile ezikhangayo zezakhiwo: West Railway Station, Sunac Paradise, Sunac Mao
Ukudla okulula okukhethekile nezibiliboco: Idolobha elingaphansi komhlaba iSunac Mao Mall linakho konke okudingayo ukuze uthole ukudla okulula
5. Isikhumbuzi esifudumele: ukubhaliswa kokungena kuyadingeka ngaphambi kokungena.
I-Locals Homestay ibilokhu iphikelela ekwakhiweni nakwikhwalithi, futhi iphikelela ekunikezeni insizakalo eqotho yesihambi kuwo wonke umhambi. Izindlu ezifakiwe zihlanganisa amadolobha angu-65+ ahlanganisa i-Guangzhou, i-Beijing, i-Shanghai, i-Chengdu, i-Chongqing, i-Hangzhou, ne-Wuhan.
[Isingeniso sezakhiwo] Ikhaya lethu liseSifundeni Esisha saseHonggutan eNanchang. Ikhaya lethu laklanywa ngokucophelela abaklami abangochwepheshe, ifenisha ekhethwe ngokucophelela yezinga eliphezulu, upende ongenawo we-Nippon Formaldehyde neminye imihlobiso, kanti abahlinzeki besikhathi esigcwele bahlinzeka ngamahora angu-24. isevisi yokunaka.
-Irenti yanyanga zonke yezinyanga ezi-4 noma ngaphezulu: amanzi, ugesi, igesi, indawo, inethiwekhi, nezimali zikamabonakude zamakhebula kufanele zikhokhelwe ngeshejuli ngokusekelwe ekukhiqizeni kwangempela. Ngemva kokufakwa kwe-oda lanyanga zonke lerenti, umphathi wezinkabi uzophinda asayine isivumelwano nawe futhi aqinisekise imininingwane yenkontileka.
【Vimba isiko lesici】Indawo itholakala esikhungweni sezepolitiki, samasiko kanye nezohwebo. Indawo emaphakathi yedolobha lezintaba inezokuthutha ezikahle kanye nezindawo ezizungezile eziphelele.
5. Isikhumbuzi esifudumele: Kudingeka ubhalisele ukungena ngaphambi kokungena, futhi udinga ukubhalisa imininingwane yekhadi likamazisi ukuze uthole umshwalense wendawo, ubeke indawo yomphakathi enokuthula, ukuze ungathinti omakhelwane noma abahlali bomphakathi.